John Buchanan – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
John Buchanan is the Director of Research at the Institute for Strategy and Policy - Myanmar. He is alsoaPhD Candidate in the Department of Political Science at the University of Washington in Seattle, Washington. John’s fields of study include international relations, comparative politics and Southeast Asia. His research interests include Southeast Asian politics, civil-military relations, state formation, conflict and its relationship to natural resources. John has written reports and articles in several publications. He is the co-author of Developing Disparity - Regional Investment in Burma’s Borderlands, which was published by the Transnational Institute. He recently authored Militias in Myanmar, which provides background on Myanmar’s complex systems of militias and their roles in conflict and society. John is from the United States and has lived in Southeast Asia for overadecade.
ပင်လုံအလွန်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကျပ်အတည်း
ယခုအညွှန်းသည် Transnational Institute မှ ဖြန့်ဝေထားသော Beyond Panglong: Myanmar’s National Peace and Reform Dilemma, Myanmar Policy Briefing 21, September 2017 စာတမ်းကို သုံးသပ် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်နှစ်တာအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ထွက်ရှိခဲ့သော အစီရင်ခံစာများအနက် အမ်စတာဒမ်အခြေစိုက် Transnational Institute (TNI) မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ခဲ့သည့် ပင်လုံအလွန်-မြန်မာနိုင်ငံ၏...
Golden Parasol A Daughter’s Memoir of Burma Chatto & Windus, 2013. Golden Parasol (ရှင်ရင်ရွှေထီး) စာအုပ်၏ ခေါင်းစဉ်ခွဲမှာ “ဗမာပြည်မှ သမီးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း”ဟု အမည်ပေးထားသော်လည်း ထို့ထက်များစွာ ပိုလွန်ပါသည်။ စာရေးသူ ဝင်ဒီလောရုံသည် စာဖတ်သူများအနေဖြင့် သူ၏ဖခင် အက်ဒွပ်လောရုံအပေါ် ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက်စေနိုင်မည့် ခရီးတစ်ခုဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပေသည်။ ထို့အပြင်...
၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ရန်ကုန်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အခင်းအကျင်းများအပေါ် သမာသမတ်ကျသည့် ချဉ်းကပ်မှု
၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ရန်ကုန်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အခင်းအကျင်းများအပေါ် သမာသမတ်ကျသည့် ချဉ်းကပ်မှု ၁ ဂျွန် ဗျူခန်နန် ၂ ■ ၁။ နိဒါန်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အပြင် များပြားလှသော သီးခြားပဋိပက္ခများလည်း ရှိပေသည်။ ၃ သုတေသီများမှာ ပြည်တွင်းစစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်းပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရေးသားခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏...
စပ်ကြား အုပ်ချုပ်ရေးများနှင့် လူမှု လူ့အဖွဲ့အစည်း အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်
In MYANMAR QUARTERLY
■ ဂျွန် ဗျူခန်နန် ၁ တပ်မတော်ဟာ အသွင်ယူ ဒီမိုကရေစီစနစ် တစ်ရပ်ကို ကူးပြောင်းမှုမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက NLD က ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အစိုးရကတော့ စပ်ကြား အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြန်ပါတယ်။ စပ်ကြား အုပ်ချုပ်ရေးဟာ ဒီ The Myanmar Quarterly မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ပထမဦးဆုံး issue မှာ ပင်မ အယူအဆ အဖြစ်နဲ့ တင်ပြသွားမယ့် အယူအဆ တစ်ရပ်ပါ။ စပ်ကြား...